सिके राउतकाे जीवनीमा फिल्म बन्ने – Hotpati Media
सिके राउतकाे जीवनीमा फिल्म बन्ने
१ श्रावण २०७६, बुधबार २२:२७ मा प्रकाशित (1 वर्ष अघि) अनुमानित पढ्ने समय : २ मिनेट
काठमाडाैं- मधेश अभियन्ता डा. सिके राउतको जीवनीमाथि नेपाली फिल्म निर्माण हुने भएको छ । ‘डा. सिके राउत’ नाम जुराइएको फिल्मको मंगलबार राजधानीमा एक कार्यक्रमका बीच औपचारिक निर्माण घोषणासँगै निर्माण टिमले टीजर पनि सार्वजनिक गर्‍यो । फिल्ममा सिके राउतको भूमिका भोजपुरी फिल्मका ‘पावर स्टार’ को रुपमा परिचित परदेशी शाहले निभाउनेछन् । उनी ‘एस.पी खरेल’ फिल्मबाट चर्चामा आएका थिए ।
‘डा. सिके राउत’ मा पुकार भट्टराई, ध्रुव कोइराला, विशाल पहारी, किरण थापा, राजिव कर्णलगायतका कलाकारहरुको पनि अभिनय रहनेछ । अभिनेत्रीको भने टुंगो लागेको छैन । भदौबाट फिल्मको छायांकन सुरु हुनेछ भने आउँदो छठ पर्वमा रिलिज गर्ने निर्माण टिमको तयारी छ । अभिनेता शाहले फिल्ममा सिके राउतको भूमिका निर्वाहा गर्न पाउनु आफ्नो लागि ठूलो अवसर र चुनौती रहेको बताए ।
उनले भने, ‘सिके राउत सरको बोल्ने र हिँड्ने स्टाइल कपी गर्न मैले केही दिन उहाँको संगत गरेँ । अझै १०/१५ दिन उहाँसँग बसेर सिक्नु छ । यो फिल्म मधेशको मात्र नभएर सिंगो नेपालको हो ।’ निर्देशक शाह भने अस्वस्थका कारण कार्यक्रममा उपस्थित भएका थिएनन् । पवन गौतमले खिच्ने फिल्ममा रामजी लामिछाने र लिगेश भट्टराईको कोरियोग्राफी रहनेछ । बन्दे प्रसादले फिल्मको सम्पादन गर्ने जिम्मेवारी पाएका छन् ।
‘फिल्म बनाएपछि चल्नु पनि पर्छ । त्यसैले कमर्शियल बनाउन फिल्ममा केही काल्पनिक कुराहरु पनि जोडिनेछ’, उनले फिल्मलाई फिल्मकै रुपमा बुझ्न आग्रह गर्दै अगाडि भने, ‘फिल्ममा केही विवादस्पद कुरा पनि आउन सक्छन् । तर, त्यो एउटा इतिहास भइसकेको छ ।’ एउटा मान्छे किन विद्रोहमा उत्रिन्छ भन्ने कुरा फिल्ममा देखाइने उनको भनाई छ । माँ राधिका इन्टरटेन्मेन्टको ब्यानरमा बन्ने फिल्मको निर्माण लागत डेढ करोड अनुमान गरिएको छ ।